UWSA “ဝ” တပ်ဖွဲ့မှလူကုန်ကူးခံဗီယက်နမ်နိုင်ငံသူ(၄)ဦးအားကယ်တင်လွဲ​​ပြောင်း​ပေး
UWSA”ဝ” တပ်ဖွဲ့မှလူကုန်ကူးခံဗီယက်နမ်နိုင်ငံသူ(၄)ဦးအားကယ်တင်လွဲ​​ပြောင်း​ပေးခဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ အမှတ်(၁၆)လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်း​ရေးရဲတပ်ဖွဲ့စု၊(လားရှိုးမြို့)၏အကူညီ​တောင်းအ​ကြောင်းကြားလာမှုဖြင့် မိမိတို့ “ဝ”ပြည်နယ်ပြင်ပဆက်ဆံ​ရေးဌာနနှင့်UWSA ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းမြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူ​ပေါင်းရှာ​ဖွေကယ်တင်ပြီး အဆိုပါလူကုန်ကူးခံ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသူ (၄)ဦးအား သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့နယ်ခြားမိုင်းပတ်”ဝ”ဂိတ်​နေရာ မှာ(ယ​နေ့မနက် ၉:၀၀နာရီ)အချိန်၌လွဲ​ပြောင်း​ပေးအပ်ခဲ့​​သည်။ Credit – Nyi Rang...
မန္တ​လေးမှာ ဂျပန်နိုင်ငံသားထံမှ ပိုက်ဆံအိတ် လုယူထွက်ပြေးခဲ့သူများ ဖမ်းဆီးရမိ
ဂျပန်နိုင်ငံသားထံမှ ပိုက်ဆံအိတ် လုယူထွက်ပြေးခဲ့သူများ ဖမ်းဆီးရမိ မန္တလေးမြို့၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ပြည်ကြီးမျက်ရှင်ရပ်ကွက်၊ လမ်း ၃၀)၊ ၆၈-၇၀ လမ်းကြားတွင် စက် ဘီးစီးနေသူ ဂျပန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးထံမှ ပိုက်ဆံအိတ် လုယူထွက်ပြေးသူများကို ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။...
ပန်းချီနှင့် ပန်းယွန်း အထိမ်းအမှတ် ၂၀၀ ကျပ်တန် တံဆိပ်ခေါင်းသစ် နှစ်မျိုးထုတ်​ဝေ
ပန်းချီနှင့် ပန်းယွန်း အထိမ်းအမှတ် ၂၀၀ ကျပ်တန် တံဆိပ်ခေါင်းသစ် နှစ်မျိုး ရောင်းချပေးမည် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သုခုမအနုပညာရပ်များကို မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအကြား ပိုမိုသိရှိ အလေးထားစေရန်ရည်ရွယ်၍ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ သုခုမအနုပညာ ပန်းဆယ်မျိုးတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော...
နယ်သတင်းများ , December 16, 2020
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ကိုဗစ်ထိစပ်လူနာများ ထားရှိရန်ပြင်ဆင် ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ(၁၆) မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် Main Building အဆောင်သစ်တွင် Quarantine Center အဖြစ် ထားရှိရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ နေရာတွင်...
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) မှ လှူဒါန်းသည့် COVID-19 ဓာတ်ခွဲမှု PCR Test Kit များအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံ နေပြည်တော်၊ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်...
၂၀၂၁ နှစ်ကူးမှာ ၇ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပမည့် အွန်လိုင်းတရားပွဲကြီးတွင် နေ့အလိုက်ဟောကြားမည့် ဆရာတော်ကြီးများ
🙏🌼🙏🌼🙏🌼 ၂၀၂၁ နှစ်ကူးအွန်လိုင်းတရားပွဲကြီးကို ၇ရက်တိုင်တိုင် ပူဇော်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး နေ့အလိုက်ဟောကြားမည့် ဆရာတော်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ၁.၁.၂၀၂၁ – ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၂.၁.၂၀၂၁ – သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ၃.၁.၂၀၂၁ – ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၄.၁.၂၀၂၁ – ယောဆရာတော်ဘုရားကြီး...
ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီး၊ကိုကိုးကျွန်းမြို. (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးလင်း​ရေးအတွက် ​ဆောင်ရွက် နေ ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ.ဘတ်ဂျတ်ရန်ပုံ​ငွေ ဖြင်.ဆောင်ရွက်​သော ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီး၊ကိုကိုးကျွန်းမြို. (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးလင်း​ရေးအတွက် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား​ပေး​ရေး​ကော်ပို​ရေးရှင်းမှ အချိန်နှင်.တစ်​ပြေးညီ ကြိုးပမ်း​ဆောင်ရွက်​နေပါတယ်။ Credit – ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား​ပေး​ရေး​ ကော်ပို​ရေးရှင်း
နယ်သတင်းများ , December 15, 2020
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် (၇၃)နှစ်မြောက် တပ်မတော်(လေ)နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားတက်ရောက် ======================================== ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် မိတ္ထီလာတပ်နယ်ရှိ လေကြောင်းအတတ်သင်လေတပ် စခန်းဌာနချုပ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော (၇၃)နှစ်မြောက် တပ်မတော်(လေ)နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုစစ်ရေးပြအခမ်းအနားနှင့် လေယာဉ်/ရဟတ်ယာဉ်များ သရုပ်ပြပျံသန်းခြင်းအခမ်းအနားသို့...
လေးကောင်ဂျင် လောင်းကစားပြုလုပ်သူများအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ဒါန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒါန်းကျေးရွာအနီး တောထဲ၌ လေးကောင်ဂျင် လောင်း ကစားပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းအရ စဉ့်ကူနယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲစခန်းမှူးနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲအချိန်ခန့်က သက်သေများနှင့်အတူ...
« Previous 1 …4567 8910 … 129 Next »